स्टेचर बनाउने सीप गाउँगाउँमा - Awajonline Online Newspaper
स्टेचर बनाउने सीप गाउँगाउँमा
आवाज संवाददाता २४ मंसिर २०७४, आईतवार
दोलखा, २२ मंसिर
आजभोली विरामी पर्दा स्टेचरमा हालेर स्वास्थ्य संस्था लैजानु पर्छ भन्ने सबैमा चेतना बढेको छ । चतना वृद्धिसँगै स्टेचर बनाउने सीप पनि गाउँ गाउँमा विकास हुन थालेको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ४ बञ्चरेकी प्रमिला विकले स्टेचर बनाउँन जान्दा छिमेकीको ज्यान बचेको छ ।
एक महिना अघि छिमेकी भतिज पर्ने १२ वर्षिय बालक एक्कासी विरामी परेपछि अस्पताल लैजानका स्टेचर आवश्यकता प¥यो । गाउँमा स्टेचर नभए तापनि प्रमिला आफैंले स्टेचर बनाएर ति बालकलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गरिन् ।
प्रमिलाले स्टेचर बनाउन जानेपछि छरछिमेकमा कोही विरामी पर्दा स्टेचर बनाउन उनी आफैं पुग्छिन् । आफूले जानेको सीप अरुलाई पनि सिकाउँछिन् । “सीप जानेपछि आपत्मा काम लाग्दो रहेछ” उनले भनिन् “स्टेचर भएपछि विरामीलाई परम्परागत डोकामा बोक्दा भन्दा सहज हुदो रहेछ ।” स्टेचरमा बोकेर गाडीको सडकसम्म पु¥याउँदा सहज हुने र एकै व्यक्तिलाई मार पनि नपर्ने उनको बुझाई छ ।
हुन त अहिले लामिडाँडा र लादुकमा टोल टोलमा स्टेचर छ । तर भनेको बेला कहिले विग्रने र नपाउने समस्या हुन्छ । स्टेचर बनाउनका लागि घरायसी बाँस, तन्दा, डोरी प्रयोग गरेरै बनाउन सकिने लामिडाँडाकै अर्की महिला गीतादेवी पाठकले बताइन् । गत जेठमा सामुदायिक विकास मञ्च र ह्याण्डीक्यापको सहयोगमा आपत्कालिन प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिममा जाँदा स्टेचर बनाउन जानेको उनले बताइन् ।
साविकको लामिडाँडामा मात्र प्रमिला र गीतादेवी जस्ता स्टेचर बनाउन जान्ने २० जना छन् । सबैले स्टेचर बनाएर व्यवहारिक प्रयोग नगरे तापनि धेरै जसोले आपत्का बेलामा काम गरेको लामिडाँडाकै खुम्बकुमारी कार्कीको भनाई छ । कहिलेकाँही स्टेचर बनाउन अलमल परे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग पनि समन्वय गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
गाउँ घरमा धेरै युवाहरु आजभोली भेटिदैनन् । भएका पुरुषहरु पनि घर बनाउन र विभिन्न रोजगारीका लागि गाउँ बाहिरै हुन्छन् । गाउँमा बुढाबुढी, केटाकेटी र महिलाहरु मात्र हुन्छन् । “रुखमा चढेर घाँस काट्दा वा भीरमा घाँस काट्दा दाउरा ल्याउँदा धेरै जना लडेका छन्” लादुककी सुन्दरी तमाङले भनिन् “विगत्मा उनीहको समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गयो, अब त्यसो हुन हामी दिंदैनौं ।”
२ वर्ष अघिको भुकम्पमा लादुक र लामिडाँडामा धेरैको ज्यान गयो । घाइतेहरुको समयमा प्राथमिक उपचार समेत नपाउँदा बढी रगत बगेर ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीयहरुलाई नमिठो अनुभव छ । त्यस्तो विपत्मा कसैले पनि प्राथमिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर अहिले लादुकका धेरैले प्राथमिक उपचार गर्न समेत तालिम लिएका छन् ।
विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष बुक्ताम तमाङले विभिन्न क्षेत्रबाट आउने तालिममा वडाले पनि समन्वय गरेर सक्दो उपयोग गर्ने बताए । भुकम्पपछि पुरुषभन्दा महिलाहरु नै बढी यस्ता घटनाप्रति सजग रहेको उनले बताए । सामुदायिक विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक गोपालकृष्ण बस्नेतले भुकम्प, आगलागी वा जस्तोसुकै आपत्का बेला पनि उपयोगी हुने किसिमले तालिमको व्यवस्था गरेको बताए ।